Britain Oo Lagu Mamnuucay In Ay Ku Soo Noqdaan Dadka U Dhashay Ee Ka Soo Dagaalamay Wadamada Carabta | Awdalmedia.com
Britain Oo Lagu Mamnuucay In Ay Ku Soo Noqdaan Dadka U Dhashay Ee Ka Soo Dagaalamay Wadamada Carabta
Thu 07 December 2017.
Ma jiro muwaaddin Britain u dhashay oo u soo dagaallamay kooxda isku magacawday Dowladda Islaamiga ah oo loo oggolaanayo inuu dalka ku soo laabto, sidaa waxaa yiri xoghayaha difaaca ee UK.
Wareysi uu siiyay wargeyska Daily Mail, ayuu Gavin Williamson ku yiri: "Aragtideydu waxay tahay in qof argagixisada ka tirsaan oo dhintay uusan wax dhib ah u geysan karin Britain."
Wuxuu sheegay inay tahay in wax walba la sameeyo si loo burburiyo loona cirrib tiro khatartaas.
Ugu yaraan 800 oo dagaalamayaal u dhashay UK ayaa aaday dalalka Siiriya iyo Ciraaq si ay uga barbar dagaallamaan Daacsih, iyadoo 130 ka mid ah dadkaasi lagu dilay dagaalka.
Williamson, oo qabtay xilka xoghayaha difaaca bishii la soo dhaafay, ayaa wargeyska u sheegay: "Ma aaminsani in argagixiye kasta, haddey u dhasheen dalkan iyo haddey dal kale ka soo jeedaanba in loo oggolaado inay dalkan dib ugu soo laabtaan."
Dagaal-yahannada Britain u dhashay ee u qaxay dalalka kale ayuu sidoo kale sheegay in la qaban doono oo aan loo oggolaan doonin inay UK ku laabtaan.
Wuxuu intaas raaciyay in sidoo kale aysan jirin meel ay ku badbaadayaan oo dibadda ku taalla.
Mar sii horreysay wasiirka arrimaha horumarinta caalamiga ah ee UK, Rory Stewart, ayaa sheegay in habka keliya loola dhaqmayo dagaal-yahannada Daacish ee UK u dhashay kuna sugan Siiriya ay tahay in la dilo.
Feker taa ka duwan waxaa qaba Max Hill QC, oo ah falanqeeye madax bannaan ee sharciga argagixisannimada, wuxuuna sheegay in muwaaddiniinta Britain ee ugu biiray Daacish iyagoo aan waxba ogeyn inay tahay inaan la ciqaabin oo taa beddelkeeda marka ay soo laabtaan lagu dhex daro bulshada.
Labo sano kahor, dowladda Britain ayaa warqad saddex-sadar ka koobanayd u dirtay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyadoo ku codsaneysa in la dilo xagjirka ka soo jeeda magaalada Cardiff ee Reyaad Khan.
Dowladda ayaa sheegtay in dilkaasi uu ahaa mid sharci ah oo ku dhisan is-difaacid, maaddaama 21-jirkaasi uu hagayay weerarro hubeysan.